Tsy mahay mandray ny marina ny matihanina amin'ny haino aman-jery sosialy. Martech Zone
Nanao andrana aho tato ho ato. Taona vitsivitsy lasa izay dia nanapa-kevitra ny ho 100% aho mangarahara momba ny zavatra inoako manokana momba ny politika, ara-panahy ary ireo zavatra hafa ny pejiko Facebook. Tsy izany no fanandramana… fa ahy fotsiny aho. Ny tiako holazaina dia ny tsy hanafintohina ny hafa; natao mangarahara fotsiny izany. Rehefa dinihina tokoa, izany no lazain'ny matihanina amin'ny media sosialy amintsika, marina? Nambaran'izy ireo hatrany fa ny tambajotra sosialy dia manolotra an'io fotoana tsy mampino io hifandraisany sy hahatongavana mangarahara.
Mandainga ry zareo.
Nanomboka herinandro vitsivitsy lasa izay ny andrana nataoko. Najanoko ny fandefasana lahatsoratra nampiady hevitra tao amin'ny pejiko Facebook ary nijanona tsy niady hevitra momba ireo lohahevitra ireo aho rehefa navoakan'ny olon-kafa tao amin'ny pejin'izy ireo. Ity dia anecdotal, saingy ny fanandramana dia nahatonga ahy hanatsoaka hevitra telo:
Malaza kokoa aho rehefa Mangìna ary tazomy ho ahy irery ny hevitro. Marina izany, tsy te hahalala ahy ny olona na te-hangarahara aho fa ny persona fotsiny no tadiaviny. Anisan'izany ireo namako, fianakaviako, orinasa hafa, mpiara-miasa amiko… rehetra. Nifandray bebe kokoa tamin'ny lahatsoratro izy ireo, arakaraka ny tsy maha-be resaka azy ireo. Tsy mahagaga raha manapaka amin'ny Internet ny horonantsary saka.
Ny ankamaroan'ny mpanolo-tsaina amin'ny media sosialy tsy misy fahitana amin'ny fiainany manokana, olana, finoana, ary olana mampiady hevitra amin'ny Internet. Aza mino ahy? Mandehana mankamin'ny pejy Facebook anao manokana an'ny mpampianatra haino aman-jery sosialy ary mitadiava zavatra mampiady hevitra. Tsy te hitsambikina amin'ny bandwagons ampahibemaso aho - izay matetika ataon'izy ireo - ny tiako holazaina dia ny miana-javatra manohitra ny toe-piainana.
Ny ankamaroan'ny mpanolo-tsaina amin'ny media sosialy manao tsinontsinona ny adihevitra feno fanajana. Amin'ny manaraka ny mpitsabo haino aman-jery sosialy tianao indrindra izay nanao kabary na nanoratra boky momba ny mangarahara dia nitsambikina teny an-dàlam-pifandraisana, ary tsy miombon-kevitra amin'izy ireo ianao… lazao ao amin'ny pejy Facebook-ny. Halany izany. Tsy latsaky ny in-3 no nangatahan'ny mpiara-miasa tamiko tamiko miala amin'ny pejin'izy ireo ary ento any amin'ny toeran-kafa ny hevitro. Ny sasany kosa nanaraka ahy sy nanala ahy tsy ho namany rehefa hitako fa misy zavatra inoako mifanohitra.
Aza diso hevitra aho fa mafana fo aho. Tiako ny adihevitra lehibe ary tsy manintona ny totohondiko aho. Mirona amin'ny lafiny iray ny haino aman-jery sosialy raha matetika kosa aho miankina amin'ny lafiny hafa amin'ny lohahevitra maro mampiady hevitra. Tsy miombon-kevitra amin'ny olona aho raha tsy te hiombon-kevitra fotsiny - fa miezaka ny milaza ny marina sy mangarahara momba ny zavatra inoako manokana aho. Ary manao izay fara heriko aho mba hijanonana ho zava-misy sy tsy hiadian-kevitra… na dia tsy mifehy ny fanesoana aza aho.
Matetika ianao no maheno amin'ny Internet sy amin'ny haino aman-jery, mila resaka marina isika. Bogus… ny ankamaroan'ny olona dia tsy te-hanao ny marina, fa ny anao fotsiny dia mitsambikina amin'ny bandwagon misy azy ianao. Tian'izy ireo ianao, hizara ny fanavaozana anao, ary hividy avy aminao rehefa hitany fa mifanaraka amin'izy ireo ianao. Ny marina momba ny media sosialy dia:
Tsy tantinao ny marina.
Izaho aza nanana mpandahateny lehibe iray nanatona ahy tamina hetsika nasionaly, namihina ahy ary nilaza tamiko fa tiany ny fijoroako raisiko amin'ny lohahevitra an-tserasera… tsy azony lazaina ampahibemaso loatra izany. Tsy mba tiany na nizara hevitra na lahatsoratra nozaraiko tao amin'ny pejiko Facebook mihitsy aho na dia manaraka ahy aza izy. Tsy te-hametraka teny ao am-bavany aho, saingy milaza amiko izany fa ny persona an-tserasera dia an-tariby, voasokitra tsara mba hiantohana ny lazany nefa tsy mametraka loza amin'ny karama.
Ka tsy afaka ny tsy hanontany tena aho. Inona koa no ambaran'ireto olona ireto an-tserasera izay noforonina mba ho malaza, nefa tsy voatery ho ny fahamarinana? Rehefa mametraka ny paikadin'ny media sosialy ho an'ny mpanjifantsika izahay dia matetika no mahita fa inona izany malaza tsy nisy fiantraikany velively toy ny inona edgy.
Ity misy mangarahara sy mahitsy aminao - mpandainga ny ankamaroan'ny matihanina amin'ny media sosialy ary tokony hanaiky izany fotsiny. Tokony hatsipy ny toro-hevitr'izy ireo momba ny mangarahara ary lazao amin'ireo orinasa fa, raha maniry ny hampitomboana ny fahazoana sy ny fanekena izy ireo, dia tokony hisoroka ny fifanolanana, hitsambikina amin'ny lazany malaza, hamolavola persona tia olona… ary hijerena ny fitomboan'ny tombom-barotra. Raha lazaina amin'ny teny hafa - araho ny fitarihana sy ny lainga.
Rehefa dinihina tokoa… iza no miahy ny tsy fivadihana sy ny fahamarinana rehefa misy vola azo.
Tags: resaka marinamanao ny marinampandaingany laingahaino aman-jery sosialympanolo-tsaina amin'ny media sosialymatihanina amin'ny media sosialyfahamarinana
Landy: avadiho ho toy ny sary an-tsary navoaka ny data sy ny takelaka
19 Jul 2015 amin'ny 1:31 PM
Izay mendrika azy dia tiako ny mangarahara anao amin'ny Internet. Mamelombelona ary tiako ny mieritreritra fa mahalala anao tsara aho hahafantatra ny fanirianao hiady hevitra am-panajana. Tiako ny olona manao ny marina amin'ny Internet sy ny any ivelany. Ampirisihiko ianao hitandrina ny tenanao.
19 Jul 2015 amin'ny 1:51 PM
Tsy matihanina amin'ny media sosialy aho na dia misy olona sasany aza mametraka ahy ao amin'io boaty io. Liana fotsiny aho, sokajinao ho olona tsy mahazaka ny marina ve aho, tsy mankafy adihevitra ary manalavitra ny mangarahara?
19 Jul 2015 amin'ny 2:17 PM
Shel, ny mifanohitra amin'izay indrindra no izy. Notazominao hatrany ny fifandraisana feno fanajana amin'ny alàlan'ny tsy fitovianay! Izay no antony hanajako anao fatratra!
19 Jul 2015 amin'ny 4:31 PM
OK Doug, hiteny aho fa tsy miombon-kevitra aminao, miankina amin'ny toetran'ny fijoroana iray sy ny tontolon'ny fifamofoana.
Raha eo amin'ny sehatry ny asa aman-draharaha, ny fomba fijery amin'ny marketing, media sosialy, sns, ny adihevitra na hevitra iray, ary misy tsy miombon-kevitra na manaiky an-karihary rehefa misy adihevitra, dia tsy marina izany.
Raha ny resaka fivavahana, politika, soatoavina manokana dia tsy ao anatin'ny sehatry ny asa aman-draharaha, ary mangina izy ireo, tsy midika izany fa miantsoantso izy ireo na mitahiry persona diso. Mety hahatsapa toa ahy izy ireo fa misy fotoana sy toerana hanaovana dinika samihafa.
Ny fanontaniako dia hoe tena tezitra be momba an'io ve ianao sa miloko borosy malalaka fotsiny mba hahatonga ny mpamaky ho marina kokoa? Miezaka ny hahay handanjalanja aho ary hisoroka ny hyperbole amin'ny lahatsoratro sy ny valinteniko, ary tsy mihetsika firy izy ireo toy ny feno ny fihetseham-po, “tsy miserana ny resaka maneso”. Soa fa tsy mpampianatra media sosialy aho.
19 Jul 2015 amin'ny 4:40 PM
Tena sahirana amin'ny lahatsoratra iray, nanolotra azy io talohan'ny nanararaotako nanitsy azy… Araka ny nolazaiko, tena tsy mpampianatra media sosialy (indrindra raha ny fahafantarana ny fanovana lahatsoratra nataoko tamin'ny findaiko…)
Antenaiko fa mazava ny tiako holazaina, fa ny esoeso sy ny fihetsem-po dia mahazo valiny fa tsy mety foana na marina ihany koa.
19 Jul 2015 amin'ny 6:47 PM
Tsotra ny tiako holazaina… fa ny ankamaroan'ny matihanina manome torohevitra amin'ny media sosialy dia tsy manaraka ny toroheviny akory. Tsy mandaitra ny mangarahara sy ny fifandraisana raha tsy hoe mahitsy sy mahitsy. IMO, ny ankamaroan'ny antony ananantsika olana amin'ny Internet dia ny tsy fahafahan'ny olona miteny ny sainy sy manana resaka marina, na ny tsy fandeferan'ireo ao amin'ny media sosialy hanaja ireo izay manana hevitra tsy mitovy. Na izany na tsy izany dia tsy manampy ireo orinasa hiresaka mahomby amin'ny mpanjifany izy ireo - na ny mifamadika amin'izany.
19 Jul 2015 amin'ny 7:59 PM
Tsy voahaja ity efitrano fitsarana ity!
Milaza aho fa rehefa vonoinao ny olona sasany dia ampodinao ny olona sasany. Lazao izay tianao Doug (fantatro fa hanao izany ianao). Mazava ho azy fa misy oodles mpihatsaravelatsihy mitsikilo ny maha-azo itokiana azy ary avy eo mampiseho ny fahamarinany fa tsy eo afovoan'ny lalana, ka faly aho fa nanambara izany ianao.
Heveriko fa na aiza na aiza no misy anao, raha miditra amin'ny politika ianao dia mankahala ny olona. Azafady. Ny media sosialy dia heverina fa hanampy amin'ny demokrasia ny resaka, sa tsy izany?
19 Jul 2015 amin'ny 9:15 PM
Heveriko izany, Barry! Fa hitako fa maro no tsy sahy mizara ny zavatra inoan'izy ireo. Ratsy loatra izany, raha ny hevitro.
Jul 20, 2015 amin'ny 6: 52 AM
Mampalahelo fa ny vola no toa arofenan'ny tsy fisian'ny mangarahara. Voasoratra tsara, tsara laza ary niaina tsara.
20 Jul 2015 amin'ny 12:46 PM
Jul 20, 2015 amin'ny 8: 56 AM
Sombina tsara izany, Doug. Ny filazana fa tsy manana akanjo ny Emperor media sosialy dia fanehoana fahita mangarahara amin'ny tena mangarahara.
Saingy heveriko fa tery loatra ny fanilihana ireo “consultant media sosialy” ho an'ny fitsikerana. Ny tahotra ny ho voaroaka amin'ny media sosialy dia mametra ny fizarana ny rehetra fa ny maditra indrindra eto amintsika.
Tsy misy isalasalana fa ny haino aman-jery sosialy dia mampiroborobo ny fanajana sy ny fahitsiana ara-politika. Io no toetran'ny mpanelanelana.
20 Jul 2015 amin'ny 12:42 PM
Marina fa be ny olana… fa ny olona mitory sy mandray karama no tondroiko ny rantsan-tànako.
Jul 20, 2015 amin'ny 8: 57 AM
Ny fomba niresahako an'io dia ny fahazahoako manao raharaham-barotra ao amin'ny LinkedIn sy manokana amin'ny Facebook. Twitter dia mahazo fifangaroana maivana amin'ireo. Vokatr'izany dia MIFIDY bebe kokoa amin'ny namako na manaiky ny fangatahan'ny namana ao amin'ny Facebook aho. Tiako ho fantatr'izy ireo manokana aho ary, noho izany, tsy dia gaga amin'ny hevitro izy ireo ary / na fantatr'izy ireo fa mankafy adihevitra na adihevitra fanajana.
Amin'ity fomba ity dia hitako fa afaka mizara ny hevitro aho ary mandray anjara amin'ny fifanakalozan-kevitra raha mbola mitazona ny fifandraisako.
20 Jul 2015 amin'ny 12:47 PM
Ka tsy maintsy manivana ny tenanao ianao satria misy olona tsy mitovy hevitra ary mitsara anao amin'ny zavatra inoanao mihitsy aza… na manaja toy inona aza ianao. Fantatro. 🙂
20 Jul 2015 amin'ny 4:49 PM
Tsy fantatro fa hihevitra an'io ho toy ny sivana tahaka ny fizarazarana aho. :) '
Jul 20, 2015 amin'ny 9: 59 AM
Lahatsoratra nahagaga tokoa ity. Vonona hanao ahoana aho rehefa misy orinasa? Hatafintohina olona iray izay manao raharaha miaraka amiko ve ny toerana misy ahy? Tsy mahay zavatra ara-tsosialy an-tserasera aho ka mirona tsy handefa matetika. Nilaza tamiko ny reniko mba tsy hanalavitra ny lohahevitra politika sy fivavahana. Amin'ny ankapobeny, ny olona dia manana fampahalalana marina, hevitra ary fifosana (FOG). Ny adihevitra toa mihitsoka ao anaty fotaka no iadian'ny fifosana sy ny hevitra. Manana fironana hanafina ny fihetsem-poko amin'ny lohahevitra ho lojika aho. Manao toy izany koa ny ankamaroan'ny olona. Rehefa afaka mijery ny fihetsem-poko aho (ary manao toy izany koa ny hafa) amin'ny lohahevitra iray vao afaka miala amin'ny hevitra sy fifosana aho ary hiresaka mahomby. Misaotra Doug tamin'ny lahatsoratra mampieritreritra!
20 Jul 2015 amin'ny 12:48 PM
Misaotra anao! Ary manaiky aho… Enga anie ka ho sahy isika hanaja ny tsy fitoviana ary hijanona tsy handositra ny adihevitra. Toa misy fiheverana eto amin'ity firenena ity fa miaraka amiko ianao na hanohitra ahy… fa tsy hoe hafa kely fotsiny amiko.
Jul 20, 2015 amin'ny 10: 20 AM
Eritreritra roa raha azoko atao.
1. Ny olombelona dia foko ary maniry filaminana sy fahombiazana. Tsy tian'izy ireo ireo izay manakorontana hatrany ny baiko ary manilika azy ireo any an'efitra. Marina koa izany amin'ny media sosialy. Tsy misy mpanelanelana hanafoana ny fitondran-tena efa an'arivony taona maro tao anatin'ny roa taona. Ny hetsika media sosialy dia tsy nanova ny fomba fifandraisan'ny olombelona * tena *. Fa kosa, nahita fomba iray hahafahan'ny olombelona manome fahafaham-po izany filàna foko lalina izany amin'ny Internet. Izany no nahatonga azy io niainga toy ny balafomanga. Tsy vaovao io. Izy io dia ahafahana manao zavatra efa tena antitra.
2. Nieritreritra aho tato ho ato fa, raha tokony hiantso an'ity vanim-potoana 'nomerika' ity, ny mpahay tantara amin'ny ho avy dia hanondro ny taona 1995 ka hatramin'ny 2030 ho 'Era of Narcissism'. Araka ny nolazaiko tetsy ambony, ny tranonkala sy ny media sosialy dia tsy mpamily fiovana, fa fampahalalam-baovao ihany no ahafahan'izy ireo maneho sy mahatsapa izay tsapan'ny tsirairay sy ny foko Amin'ity vanim-potoana niomerika ity dia nampiasa media sosialy ho fomba iray hanatanterahana ny ohabolana '15 minitra laza 'isika fa tsy tena mitondra fiovana lalina sy maharitra. Toy ny tamin'ny radio sy fahita teo aloha dia nidina haingana ho media ho an'ny olo-malaza amin'izao fotoana izao ny media sosialy hanohanana ny sarin'izy ireo (oh: Donald Trump) ary ho an'ny olona rehetra manana vava sy fitendry ho lasa 'eritreritra mpitarika', na 'fanovana agents ', na' hacker fitomboana '. Izahay dia tsy mitsahatra milalao lalao mamorona teny miafina vaovao mba hampisehoana fa manana hevitra vaovao isika (indray… fanapahana hack), ary tokony hoderaina isika ho mpitarika eritreritra. Nampihena ny teny toa ny, 'genius', 'leader', 'guru' ary ny hafa koa izahay. Hita fa ny olon-kafa rehetra ao amin'ny LinkedIn dia iray na maromaro amin'ireo voalaza etsy ambony ireo, na dia ny filazany ny lazany aza dia ny 'fanitsiana' ny tranokalan'ny orinasa voninkazo aman-janany ary hampiakatra azy ireo somary miakatra amin'ny tohatra SEO. Ny fanetren-tena sy ny etika dia be mpitia indrindra amin'izao fotoana izao, fa ny laza sy ny toetra no vola amin'ny andro. Mieritreritra aho fa hisy vanim-potoana vaovao indray mandeha rehefa miposaka ny 'big bang', saingy mandra-pahatongan'izany, momba ahy sy ny fomba hampiasako anao hahatratrarako ny tanjoko.
0.02 $ ko
20 Jul 2015 amin'ny 12:51 PM
Nampieritreritra. Fa ampiako ihany koa fa matetika ireo mandao ny maheno ary antsoina hoe 'narcissists' no mampandroso ny zanak'olombelona. Raha anisan'ny andian'omby fotsiny ianao dia mety anisan'ny olana!
Jul 20, 2015 amin'ny 11: 13 AM
Toa efa manana manam-pahaizana SM miady hevitra aminao amin'ity lahatsoratra ity ianao. Tsy manaporofo izany ve izany?
20 Jul 2015 amin'ny 12:49 PM
Miaraka amin'i Barry Feldman aho. “… Rehefa vonoinao ny olona sasany dia ampodinao ny olona sasany.” Notohizako foana fa ny hevitro dia ahy ary tsy olon-kafa ao amin'ny fantsom-piarahamoniko. Ary ankafiziko ny fiantsoana ireo havako izay tsy mitovy ny fomba fijeriko. Fa miombon-kevitra aminao koa aho fa misy olona matahotra ny hanao ady hevitra ary aleony milalao azy io soa aman-tsara. Mety hiombon-kevitra amiko aza izy ireo fa tsy hahatratra ilay bokotra “toy” noho ny tahotra sao ho fantatra izy ireo. Tsy anisan'ireny aho. Tiako ny olona sy marika mahatsikaiky.
20 Jul 2015 amin'ny 6:32 PM
Heveriko fa ny mahasamihafa azy dia ny olona sasany milaza ny zavatra inoany nefa tsy mitsara ny hafa raha tsy mitovy hevitra izy ireo. Najanoko ny fanarahana olona iray andro hafa izay tena hajaiko satria nisiokany “ireo adala mino an'izany…” ary sendra iray tamin'ireo “adala” ireo aho. Mihevitra aho fa hadinon'izao tontolo izao fa afaka tsy mitovy hevitra isika kanefa mbola manaja ihany fa mety ho tonga amin'ny fehin-kevitra hafa ny hafa amin'ny zava-misy mitovy.
20 Jul 2015 amin'ny 7:12 PM
Hevitra lehibe toy izany. Manantena aho fa hamerina ny tsy fifanarahana am-panajana eto amin'ity firenena ity isika.
29 Jul 2015 amin'ny 1:37 PM
Ny zavatra iray sahirako be dia be dia ny mandray karama amin'ny famoahana toerana ny publication sy ny mpanao politika, amin'ny maha orinasa anao atahorana hanalavitra ireo vina sy mpanjifa ianao. Mazava ho azy fa mbola tsy nitory mangarahara mihitsy aho ka heveriko fa mazava tsara aho 😉
30 Jul 2015 amin'ny 2:25 PM
Marina loatra. Azoko antoka fa very ny mpanjifa sy ny vinavinako noho ny hantsana nataoko. Na izany aza, aleoko miara-miasa amin'ireo olona manaja fa mety hanana fomba fijery hafa aho noho izay tsy. Safidy sarotra io, azo antoka.